Jadon Sancho oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyadoo ay xiiseyneyso Manchester United – Gool FM
(Yurub) 06 Seb 2020. Laacibka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa, xilli ay xiiseyneyso Manchester United.
Agaasimaha fulinta ee kooxda Borussia Dortmund ayaa bayaannadiisii ​​hore ku xaqiijiyay in ciyaaryahanka reer England uu la sii joogi doono ugu yaraan sanad kale.
Jadon Sancho ayaa wareysi uu ku bixiyay Wargeyska “Bild” ee dalka Germany wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirnaya inuu ka tagayo Borussia Dortmund, wuxuuna yiri:
“Maya, warbaahintu waa warbaahin, had iyo jeer waxay isku dayi doonaan inay sheeko abuuraan, laakiin qaabkan waa sida aad kula macaamili karto iyaga”.
“Aniga ahaan, waxaan diirada saarayaa kaliya kubadda cagta, waxaan kaliya doonayaa inaan waxa ugu fiican aan ku sameeyo kooxdeyda isla markaana aan kula guuleysto koobab ilaa iyo maalinta ugu dambeysa”.
Intaas kaddib Jadon Sancho ayaa wuxuu ka hadlay dareenkiisa ah in lagu qiimeeyo aduun dhan £ 100m, wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay, inaad gaarto qiimo sidaas u weyn, laakiin markale, xaqiiqdii ma fiiriyo in badan arrintan”.
“Aniga ahaan, waxay ku saabsan tahay inaan wanaag u sameeyo kooxdeyda iyo inaan sidoo kale nafteyda wanaag u sameeyo, marka aan ciyaaro ciyaar xun, waxaan dareemaa jahwareer, sidaas darteed marwalba waxaan jeclahay inaan ciyaaro ciyaar wanaagsan oo aan dadka tuso waxa aan sameyn karo”.
“Waan ogahay waxa aan sameyn karo, haddii aan si xun u ciyaaro, kaliya waxaan dareemayaa inaan u careysanahay naftayda, waxaana ciyaarta soo socota isku dayi doonaa inaan horumariyo wax walba qalad ah ee aan sameeyay”.
“Chelsea fursad weyn ayey u heysataa inay ugu guuleysato Premier League” – Nicolas Anelka